ပင်မစာမျက်နှာ အာရှဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Lee Kang-in Childhood Story Plus မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် မေလ 13, 2020
ကျနော်တို့အပြည့်အဝလွှမ်းခြုံတင်ပြ Lee Kang-in ကလေးဘဝပုံပြင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ အစောပိုင်းဘဝ၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊ မိဘများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ၎င်းသည်သူ၏ငယ်ရွယ်ချိန် မှစ၍ သူကျော်ကြားလာသည့်အချိန်အထိထင်ရှားသည့်အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအပြည့်အဝဆန်းစစ်ထားသည်။
Lee Kang-in ၏ဘဝနှင့်တိုးတက်မှု။ Instagram: Instagram ။
ဟုတ်တယ်၊ သင်နဲ့ငါကသူ့စွယ်စုံစားခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောနေရာများတွင်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းအကြောင်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် Lee Kang-in ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုခင်ဗျားဖတ်လို့မရဘူး။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Lee Kang-in ကလေးဘဝပုံပြင်:
ပထမဆုံးအနေဖြင့် Lee Kang-in ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်တွင်တောင်ကိုရီးယားရှိ Incheon မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူဟာသူ့အဖေသိတဲ့နည်းနည်းလေးသောမိခင်မှမွေးဖွားသောကလေးသုံးယောက်ထက်မနည်းသောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Young Lee သည်သူ၏မွေးရပ်မြေတွင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏တတိယလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သော Incheon တွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးအစ်မနှစ်ယောက်နှင့်အတူအမည်မဖော်ရသေးပါ။
Lee Kang-in သည်အာရှ၌ကြီးပြင်းလာပုံကိုကြည့်ပါ။ World WorldAtlas နှင့် Instagram ။
Incheon မှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူငယ် Lee ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဘောလုံးကွင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူသည်အသက်ငါးနှစ်မတိုင်မီဘောလုံးကစားခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကလေးဘ ၀ အားကစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး Taekwondo ၌သူ၏လေ့ကျင့်မှုနှင့်အတူလက်တွဲသွားခဲ့သည်။
Lee Kang-in သည်အသက် ၅ နှစ်မတိုင်မီဘောလုံးစတင်ကစားခဲ့သည်။ 📷: Instagram ။
Lee နှင့်ဘောလုံးနှင့် Taekwondo တို့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုသည်ရုတ်တရက်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ သူတို့ကသူဟာသူ့အဖေနောက်ကိုလိုက်ခဲ့သည့်အကျိုးစီးပွားများဖြစ်သည်။ သူသည် taekwondo ဆရာနှင့်ဘောလုံးဝါသနာပါသူဖြစ်သည်။
Lee Kang-in ၏မိသားစုကအားကစား၌ကောင်းမွန်သောအစပြုခြင်းကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ ထိုလူငယ်သည်ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ Instagram: Instagram ။
Lee Kang-in ၏ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်တည်ဆောက်မှု:
မျှော်လင့်ချက်အစပြုသည်၊ လူငယ်လီသည်အသက် ၅ နှစ်သာရှိသေးသည်၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်တွင်သူ၏ရပ်ကွက်တွင်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူသည်အသက် ၅ နှစ်မှစ၍ Instagram ကိုစတင်ကစားခဲ့သည်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲဘောလုံးကဗျာဟာသူ့ကျောင်းဘောလုံးအသင်းမှာအသင်း ၀ င်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာမို့သိပ်မကြာပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအချိန်တုန်းကသူ့အသက် (၅ နှစ်အရွယ်) ကလေးတွေအတွက်တရားဝင်ကိုးရီးယားပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိလို့ပါ။
Lee Kang-in ၏ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏အစောပိုင်းနှစ်များ
လီသည်အသက် ၆ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည်ထူးခြားသည့်ဒေသခံကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Shoot-Dori ဟုလူသိများသောရုပ်မြင်သံကြားအားကစားအဖြစ်မှန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်သူပါ ၀ င်ခဲ့သည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ပြောခဲ့သည်။ အများကြီးပြောစရာမလိုပါဘူး, Lee ကပြပွဲအပေါ်ထူးခြားသောဘောလုံးဖျော်ဖြေပွဲတင်, မြောက်မြားစွာ၏စိတ်နှလုံးကိုအနိုင်ရမသာပေမယ့်သူ့အဖွဲ့ပြပွဲ၏ဆုအနိုင်ရမြင်ခဲ့သည်။
ဘောလုံးအဖြစ်အပျက်ပြပွဲ၏ရှားပါးသောဘောလုံးပုံရိပ်ကိုရိုက်ကူးခြင်း။ Instagram: Instagram ။
ထို့နောက်တွင် Lee သည်အလုပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေ့လျားပုံရသည်။ သူသည် Yoo Sang-Chul လူငယ်အကယ်ဒမီတွင်ပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Incheon ယူနိုက်တက်အသင်း U-12 လူငယ်အသင်းသို့မ ၀ င်မီလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအနေဖြင့် Lee သည်သူအင်ချွန်းရှိ Seokjeong မူလတန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားဘဝရှိစဉ် Flyings FC တွင်ကစားနေသည်ကိုတွေ့သည်။ ။
Lee Kang-in ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - လမ်းပေါ်သို့သွားရန်ပုံပြင်:
လီ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအပြောင်းအလဲသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်သူသည်စပိန်ရှိဗလင်စီယာ CF တွင်အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်သူ၏အလုပ်ကိုပိုမိုမြင့်မားသောအမြင့်သို့တက်လှမ်းရန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ လူငယ်နည်းပြများအတွက်လီသည်ဘောလုံးကိုအနည်းငယ်ထိမိပြီးနောက်သူ့ကိုအထူးကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်မကြာပါ။
သို့သော်ဗလင်စီယာသည်တင်းကြပ်သောတောင်းဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလီ၏မိသားစုသည်ဗလင်စီယာတွင်သူနှင့်အတူနေထိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ လီ၏မိဘများကဟုတ်ကဲ့ဟုပြောဆိုခဲ့သည့်တောင်းဆိုမှုသည်ဗလင်စီယာ၏ ၁၀ နှစ်အရွယ်ကိုရီးယားအားစုဆောင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ဟန်တူသည်။ သူတို့သည်အသေးစားလက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုမထင်ရ။ လီ၏လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်မှာဝယ်လိုအားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါလူငယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဗလင်စီယာမှာအလျင်အမြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူနှင့်အတူနေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောသူ၏မိသားစုအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 📷: Instagram ။
Lee Kang-in ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - Rise To Fame Story:
Valencia ၌နှစ်များအတွင်းအားကစားသမားသည်ခွန်အား၊ အမြင့်နှင့်နည်းဗျူဟာများတိုးတက်ခဲ့သည်။ သူသည်ကလပ်အသင်းမြောက်မြားစွာပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘဲနောက်ဆုံးတွင်အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် CD Ebro ကို ၂-၁ Copa del အောင်ပွဲတွင် Los Ches အတွက်ပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုပွဲတွင်လီသည်အသက်အငယ်ဆုံးကိုရီးယားဖြစ်လာသည်။ ဘောလုံးကစားသမားသည်ဥရောပ၌ပွဲ ဦး ထွက်ပွဲထွက်ရမည်။
လာမည့်လများအတွင်းလီသည် La Liga နှင့် Europa League ပွဲများကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်တောင်ကိုရီးယားကို ၂၀၁၁ FIFA လက်အောက် ၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင်အပြေးသမားများအဖြစ်အထင်ကြီးလေးစားဖွယ်ကောင်းသောပွဲစဉ်၌အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုအပြုအမူသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်လီသည်အာရှလူငယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်လာသည်ကိုထပ်မံမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျန်သူများမှာမူသမိုင်းဖြစ်သည်။
2019 သည်လီ၏တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ 📷ဖီဖာ။
Lee Kang-in ရဲ့ရည်းစားလား?
Lee Kang-in ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာဤမူကြမ်းသည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘ ၀ နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များမဖော်ပြပါက၊ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအချက်အလက်မှမရှိသေးပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပုံအရလီသည်ဗလင်စီယာ၏ပထမဆုံးအသင်းနှင့်သူကစားသည့်ကြယ်များနှင့်အတူကစားသည့်သူ၏ရာထူးကိုခိုင်မာအောင်များစွာအာရုံစိုက်နေသည် ဖာနန်ဒိုတောရက်စ်, Daniel Parejo နှင့် ရိုဒရီဂို Moreno။ မကြာမီတွင်မိန်းကလေးများသည် Lee ၏လူနေမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရန်မကြာမီဖြစ်နိုင်သည်။
သူသည်စုံလင်သောရည်းစားကိုလေးလေးနက်နက်ရှာဖွေနေနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ Instagram: Instagram ။
Lee Kang-in ၏မိသားစုဘဝ
Lee Kang-in ၏ကလေးဘဝဇာတ်လမ်းသည်လှပပြီးစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ဖတ်ရှုမှုအမြဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏မိသားစုအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီနေရာမှာ Lee Kang In ရဲ့မိဘတွေနဲ့သူ့မိသားစု ၀ င်တွေအကြောင်းခင်ဗျားကိုပြောပြပေးပါ ဦး ။
Lee Kang-in ၏ဖခင်နှင့်မိခင်အကြောင်း
လီ၏ဖခင် Un-Seong Lee သည် Takweando ကျောင်းဆရာနှင့်ဘောလုံးဝါသနာအိုးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Lee ရဲ့အမေအကြောင်းသိပ်မသိရပါဘူး။ Valencia တွင်သူနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်သားဖြစ်သူ၏ဘောလုံးရည်မှန်းချက်ကိုထောက်ပံ့ရန်မိဘနှစ် ဦး စလုံးသည်တောင်ကိုရီးယားတွင်သူတို့၏ဘဝနှင့်သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ လီသည်သူတို့ကိုတူညီသောအတိုင်းအတာဖြင့်ချစ်မြတ်နိုးပြီးဂုဏ်ယူစေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။
Lee Kang-in ၏မိဘများအကြောင်းသိပ်မသိရ။ 📷: ClipArtStudio ။
Lee Kang-in ၏မောင်နှမများနှင့်ဆွေမျိုးများအကြောင်း:
Lee Kang-in ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ပတ်သက်သောအွန်လိုင်းမှတ်တမ်းများတွင်သူ၌အနည်းငယ်မျှသာသိသောအစ်မနှစ်ယောက်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သူ့အစ်ကိုနှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်ဖော်ပြချက်ရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ် ထိုနည်းတူစွာကွင်းလယ်လူ၏မျိုးရိုးနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်တမ်းများသည်အထူးသဖြင့်သူ၏အဘိုးအဘွားများနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဦး လေး၊ အဒေါ်၊ ဝမ်းကွဲ၊ တူနှင့်တူမများကိုလည်းမသိခဲ့ပါ။
Lee Kang-in ၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝ:
Lee Kang-in ၏မိသားစုဘဝမှအတိုက်အခံကာကွယ်သူများ၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက်ကွင်းကွင်းကွင်းကွင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်နေသောသူ၏ကွင်းဆင်းပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များသည်တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များကသူသည်နှိမ့်ချခြင်း၊
Zodiac သင်္ကေတသည် Pisces ဖြစ်သည်ဟူသောအထင်ကြီးဖွယ်ကွင်းလယ်လူသည်သူ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ဝါသနာများအတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသည့်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။ ဓါတ်ပုံများရိုက်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ အင်တာနက် ၀ င်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ပိုက်ကွန်ကိုဝင်ကြည့်ခြင်းသည်သူ၏ဝါသနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Instagram: Instagram ။
Lee Kang-in လူနေမှုပုံစံစတဲ့:
Lee Kang-in သည်သူ၏ငွေကိုမည်သို့အသုံးချသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သူသည် ၂၀၂၀ တွင်ယူရို ၁ သန်းပိုင်ဆိုင်သည်။ ကွင်းလယ်လူ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအများစုသည်ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ်များတွင်ဘောလုံးကစားခြင်းအတွက်ရရှိသောလစာနှင့်လစာများမှဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် Lee ဟာသူနေထိုင်တဲ့ဇိမ်ခံဘဝပုံစံကိုတရားမျှတစေတဲ့ထောက်ခံချက်များမှသိသာထင်ရှားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့အထောက်အထားများတွင်ကွင်းလယ်လူ၏စျေးကြီးသောစီးနင်းမှုများနှင့်စပိန်တွင်သူနေထိုင်သောအိမ် / တိုက်ခန်း၏အကုန်အကျများသောသဘာဝပါဝင်သည်။
မြင့်တက်နေသောအာရှဘောလုံးသမားသည်ယူရို ၁၀၀,၀၀၀ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည်။ Photo: PhotoFunny ။
Lee Kang-in ၏အချက်အလက်များ:
Lee Kang-in ၏ကလေးဘဝအကြောင်းနှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများအကြောင်းသင်ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ ဤတွင်သူနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်ပြည့်ဝဝရုပ်လုံးပေါ်လာစေရန်ကူညီရန်မရေမတွက်နိုင်သောသို့မဟုတ်လူသိနည်းသောအချက်အလက်များမပါရှိပါ။
အဖြစ်မှန် # 1 - လစာပျက်ပြားခြင်း:
စာရေးချိန်တွင်ဗလင်စီယာနှင့်လီ၏စာချုပ်အရသူသည်လစာအဖြစ်ယူရို ၂၃၀၀၀ ခန့်ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ဝင်ငွေကိုအပိုင်းအစငယ်များအဖြစ်ခွဲထုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါရှိသည်။
တစ်နှစ်လျှင် € 1,197,840 £ 1,041,600 $1,294,396
တစ်လလျှင် € 99,820 £ 86,800 $107,866
တစ်ပတ်လျှင် € 23,000 £ 20,000 $24,854
တစ်နေ့လျှင် € 3,286 £ 2,857 $35,506
တစ်နာရီ € 136.9 £ 119 $1,479
တစ်မိနစ်နှုန်း € 2.29 £ 1.9 $24,657
တစ်စက္ကန့်လျှင် € 0.04 £ 0.03 $0.4
ဤသည်ကားအဘယ်သို့ Lee Kang-in သင်ကတည်းကရရှိခဲ့သည် ဤစာမျက်နှာကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
ဝိုး! သင်သိပါသလား ... တစ်လလျှင်ယူရို ၂,၄၁၁ ၀ င်ငွေရှိတဲ့ပျမ်းမျှလူတစ်ယောက်ဟာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ် သုံးနှစ်နှင့်6လ Lee Kang-ins လစာရရန်။
အဖြစ်မှန် # ၃ - တက်တူး:
သူ့ကိုရီးယားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုပဲ သားတော်သည် Heung-minLee သည်တက်တူးထိုးထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ကွင်းလယ်လူသည်ကိုယ်အလေးချိန် (၆၈ ကီလိုဂရမ်) ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်သူ၏အမြင့်ဆုံး (၅ ပေ ၈ လက်မ) တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်။
အဖြစ်မှန် # ၃ - ဖီဖာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် -
Lee သည် ၂၀၂၀ မေလတွင် ၇၁ မှတ်အဆင့်ညံ့ဖျင်းသော FIFA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။ Coronavirus ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီချန်ပီယံလိဂ်ဂိမ်းများတွင်ပုံမှန်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောကစားသမား၏အဆင့်အတန်းသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်ထင်ဟပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကွင်းလယ်လူ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်သူ၏ ၈၈ မှတ်၏ရလဒ်ကိုထင်ဟပ်ခြင်းမပြုမီအချိန်သည်ကိစ္စသာဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည်တိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူ၏အလားအလာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၈၈ ကိုရရှိရန်နီးစပ်လာခဲ့သည်။ 📷: SoFIFA ။
အဖြစ်မှန် # ၃ - အသေးအဖွဲ:
၂၀၀၁ Lee Kang-in မွေးဖွားသည့်နှစ်မျှသာမဟုတ်ပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားဟုလူသိများသောအခမဲ့ပါဝင်သောစွယ်စုံကျမ်းသည်အွန်လိုင်းသို့သွားသောနှစ်ဖြစ်သည်။ Apple Computer သည် iPod ကိုတစ်နှစ်အတွင်းရောင်းချခဲ့သည်။ The Planes of the Apes ကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေမှုမြင်ကွင်းတွင် Shrek နှင့် Ocean Eleven ရုပ်ရှင်များသည်ထိုနှစ်၌ပင်ရုပ်ရှင်ရုံများကိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။
အဖြစ်မှန် # ၃ - စစ်တပ်မှကင်းလွတ်ခွင့်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားအမျိုးသားများသည်အနည်းဆုံး ၂၁ လစစ်မှုထမ်းရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်တိုင်းပြည်အားဘောလုံးဖလားခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့အဓိကဂုဏ်ထူးများရရန်ကူညီသူများမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ လီသည်သူ့နိုင်ငံအတွက်ခေါင်းစဉ်မရသေးပါ။ သူဟာတောင်ကိုရီးယား U21 အသင်းကိုကမ္ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲများသို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့်၊
ထို့ကြောင့်သူသည်အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်မတိုင်မှီတွင်ကင်းလွတ်ခွင့်မရရှိပါကထောင်ဒဏ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံမှတားမြစ်ချက်ကိုခံရမည်။ သူ၏တောင်ကိုးရီးယားသား Son Heung-minLee သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်အာရှအားကစားပွဲ၌ရွှေရရန်တောင်ကိုရီးယားကို ဦး ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့သည်။
တိုက်ခိုက်နေသည့်ကွင်းလယ်ကစားသမားသည်ကင်းလွတ်ခွင့်မရရှိပါကမဖြစ်မနေလိုအပ်သောစစ်မှုထမ်းရန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ BBC ဘီဘီစီ။
Lee Kang-in အတ္ထုပ္ပတ္တိ - ဝီကီဒေတာ
နာမည်အပြည့်အစုံ Lee Kang-in
မွေးရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊
အသက်အရွယ် ၁၉ (၂၀၂၀ မေလအထိ)
မိဘများ Un-Seong Lee (ဖခင်)
မောင်နှမ N / A
မိန်းမကလေး N / A
ဝါသနာ ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရေကူးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အမြင့်5ပေ 8 လက်မ
အလေးချိန် 68 ကီလိုဂရမ်
ပိုင်ဆိုင်မှု € 1,000,000
Lee Kang-in ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် ပတ်သက်၍ မူရင်းရေးသားချက်ကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At Lifebogger, ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်မျှတမှုနှင့်တိကျမှုအတွက်ကြိုးစားသည် အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်များ နှင့် ကလေးဘဝပုံပြင်များ. ဒီဆောင်းပါးမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမင်းမြင်ဖူးလား။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သို့မဟုတ်အောက်ဖော်ပြပါလေးထောင့်ကွက်တွင်မှတ်ချက်တစ်ခုထည့်ပါ။
Park Ji Sung ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်